Umculi ucela amavoti | News24
Umculi ucela amavoti
Lindokuhle Bhengu waseMolweni endaweni yase-Madimeni ongumculi isithombe : nosipho mkhize
INSIZWA yase-Molweni endaweni yase-Madimeni uLindokuhle and#039;Cheesenatorand#039; Bhengu (24) edume kakhulu ngomculo wohlobo lwe-Hip Hop ne-Kwaito unxusa umphakathi uyivotele njengoba ikhethwe emcimbini we-Live Your Dreams Award esigabeni se-Upcoming Artist.
UBhengu uzalelwe eNkandla kodwa usezinze eMolweni kusukela eneminyaka eyi-7 ubudala. Uthe:“Ngihlale eNkandla isikhashana kwathi sengine minyaka eyi-7 ngahlala eMadimeni. Ngibhalele abe Fever ukuze bashicilele udaba lwami njengoba ngilikhonzile leli phephandaba futhi ngihlezi ngilibona lisiza umphakathi. Ngikholwa ukuthi leliphephandaba lizongilekelela ngithole ama voti emphakathini kwi-Live Your Dreams Awards,”kusho yena.
Uthe umculo yinto ayithanda kusukela esawumfanyana. Uthe: “Umculo yinto engakhula ngiyithanda kusukela ngisamncane. Ngakhula nalolu thando kwaze kwafika isikhathi lapho engabhala khona amaculo ehlukahlukene.”
Uthe uhlele umcimbi ozonandisa umphakathi kuyo le nyanga. “Lo mcimbi ngiwuhlele ngenhloso yokuthi ngifuna ukubonisa umphakathi ukuthi ngine thalente, ukuze bengazisoli ngokungi votela. Kulo mcimbi ngihlele ukuthi kube khona nabanye abaculi abaqhamuka KwaZulu-Natal namaphethelo.
Uthe ugxile kakhulu emculweni emva kokubona ukuthi intsha eningi emphakathini igxile otshwaleni. “Ukukhulela endaweni yase makhaya akungivimbanga ukuba ngilandele iphupho lwami. Ngazitshela-nje ukuthi ngifuna ukwenza okuhlukile emphakathini ukuze ngingangeni ezidamizweni ezingekho emthethweni kanye naso tshwaleni. Umculo ungenza ngiqoqeke ngiziphathe kahle. Ngisho ngisakhula ngangingenela amaqembu adansayo ukuze ngingazitholi sengenza izinto eziphambena nomthetho,” kusho yena.
“Iculo engalibhala engilizwa ngaphakathi lithi and#039;Look where I am now” okuyiculo elinomyalezo futhi elikhuluma nentsha uqobo ukuthi ingapheli amandla ezintweni ezinhle efisa ukuzenza. Mayingavumeli noma ngubani ayitshele ukuthi ayilutho empilweni. Nami ngike ngisho ukuthi ngaqala ngingenalutho kodwa manje senginotho. Ngizizwa ngikhula mihla yonke emculweni. Leli culo liyangikhuthaza ngaso sonke isikhathi uma ngililalele. Umculo uyimpilo yami ngoba akukho okunye okungenza ngijabule njengomculo.”
Uphethe ngokuthi intsha kumele ikholelwe kukho konke ekwenzayo. “Umuntu kumele enze okuhle futhi kumele alandele iphupho lakhe. Konke okwenzayo empilweni kumele ukwenzisise ukuze ngelinye ilanga uzothola umvuzo omuhle ngalokho oyobe ukutshalile. Yingakho isisho sithi uvuna okutshalile.”
Votela uLindokuhle ‘Cheesenator’ Bhengu ngokuthumele i-SMS ethi: LYD045 enombolweni ethi: 45633 ukuvota kugcina ngoMhla ka-26 kuLwezi (November) i-SMS ibiza R1.50. Uma kukhona othanda ukwazi kabanzi ngoLindo Bhengu shayela inombolo ethi: 083 738 8741